Madaxweyne Xasan Sheekh oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday xilliga rasmiga ee ugu horeeysa oo ay baarlamaanka Soomaaliya kulanka yeelanayaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in kulanka ugu horeeya oo ay xildhibaanada cusub yeelan doonaan ay tahay 15-ka bishaan December oo ku beegan maalinta khamiista ah ee soo socoto.
Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku suurto geliyaan islamarkaana ay dedejiyaan dhaqan galka kulankaas.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa soo hadal qaaday kuraasta khilaafka ka taagan yahay, oo la sheegay in la musuq maasuqay, wuxuuna sheegay inay go’aan ka gaari doonaan guddiga doorashada iyo kuwa khilaafaadka islamarkaana ay warbixin kasoo saari doonaan.
Warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heshay ayaa sheegaya in guddiga doorashada dadban ee dalka iyo kan khilaafaadka doorashooyinka ay go’aan ku gaareen inaan shahaadooyin la siinin xildhibaanadii sida musuqa ah lagu doortay oo tiradooda gaareyso ilaa 23 xildhiaban.
Xildhibaanadaasi ayaa la sheegayaa in la musuqay islamarkaana aanan lagu dooran si xalaal ah.
Ugu dambeyntii, war-saxaafadeed kasoo baxay guddiga doorashooyinka Galmudug ayaa lagu sheegay in xildhibaanada lagu soo doortay magaalada Cadaado ay yihiin kuwa sax ah islamarkaana uu guddigaasi ka digay in faragelin ay ku sameeyaan guddiga doorashooyinka dadban ee dalka iyo kan xalinta khilaafaadka.